၁၉၇၆ က ဦးလာဘကို လူသတ်မှု၊ လူသားစားမှုနဲ့ လုပ်ကြံစွပ်စွဲခဲ့သည်…. ဆိုခြင်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ၁၉၇၆ က ဦးလာဘကို လူသတ်မှု၊ လူသားစားမှုနဲ့ လုပ်ကြံစွပ်စွဲခဲ့သည်…. ဆိုခြင်း…
၁၉၇၆ က ဦးလာဘကို လူသတ်မှု၊ လူသားစားမှုနဲ့ လုပ်ကြံစွပ်စွဲခဲ့သည်…. ဆိုခြင်း…
Posted by kai on Mar 24, 2010 in Buddhism, Critic, Science & Religion | 13 comments
Buddhism U Aung Khin U larBa
အောက်က ဆောင်းပါးကို ခေတ်ြိပိုင်က ကူးယူပါတယ်။ သူ့ရဲ့လင့်ခ်က ( http://khitpyaing.org/articles/2010/March/23310.php) ဖြစ်ပါတယ်။
ဗမာတွေဖတ်စေချင်လို့ ပါ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်ပြင်ပရောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဗမာတွေကို ဖတ်စေချင်လို့ပါ။ ပိုပြီး အထူးပြုပြီး ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့ ဗမာတွေဖတ်စေချင်တာပါ။ ခုတလောက အင်တာနက်သူရဲကောင်းတွေ လေလှိုင်းတွေစီးပြီးသူများအယူဝါဒတွေကို အကြီးအကျယ် ပုတ်ခတ်ရှုံချနေကြတာတွေများတော့ အဲဒီ သူရဲကောင်းတွေကိုလည်း သိစေချင်မိတာပါ။
ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာမှအမှန်၊ ကိုယ့်ဂိုဏ်းကအမှန်။ ကိုယ့်နည်းကအမှန် ဆိုတဲ့သူတွေကိုလည်း ရေးချင်တာ ပြောချင်တာတွေအများကြီးပါပဲ..။
ငယ်ငယ်က ကြားဖူးခဲ့တဲ့ “လူသားစားတဲ့ ဦးလာဘ” ဆိုတာကို အခုဆောင်းပါးမှာ ဦးအောင်ခင်ဖွင့်ချတော့ “လုပ်ကြံစွပ်စွဲလိုက်တာ” ဆိုပါတယ်။ အလွန်အံ့ သြမိတာပါပဲ။
အဲဒီဆောင်းပါးတခုလုံးမှာ…စိတ်ကိုထိထိခိုက်ခိုက်ဖြစ်စေတာ အဲဒီစာကြောင်းလေးမို့ ခေါင်းစဉ်အဖြစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထပ်ပြီးမှတ်မိနေသေးတာက တိရိစ္ဆာန်ရုံမှာ “ဦးလာဘ ကိုကျားစာကျွေးတယ်ဆိုပါတယ်” တကယ်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ …သံဃာတပါးကို အဲဒီလိုပြစ်မှားစေသွားလောက်အောင် စံနစ်တကျနဲ့ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်တာမို့ အမှတ်တရ အခုလိုခေါင်းစဉ်တပ်ပေးရင်းနဲ့ ပိုသိသူများရှိရင်လည်း မှတ်ချက်ရေးပေးစေလိုပါတယ် လို့ပါ..ခင်ဗျား။
ဒီလိုနဲ့ မြန်မာပြည်ထဲ မှန်ကန်မွန်မြတ်တဲ့ သံဃာတော်တွေ ဘယ်လောက်များ သိက္ခာကျ လွှင့်ပါးခဲ့ရသလဲ လည်းတွေးနေမိပါတယ်။
အခုမှ ပဲဇတ်ကြောင်းစုံ သိရတယ်
မှားယွင်းပြီး စွပ်စွဲကြတာ တော်တော် အထိနာမှာပဲ
ကျွန်တော်တို့ ကလေး တုန်းက အမေက လည်းငိုရင် ဦးလာဘ လာမယ်ဆိုပြီးခြောက်တတ်တယ်
ခုလိုရှင်းရှင်းသိရတော့လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံအပြင် ဘာမှ မ တတ်နိုင်တော့ဘူး
သေချာတာကတော့ လောလောဆယ် မင်းက အင်တာနက်ကို အသုံးချပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာပဲ
ဘာတွေဘဲပြောပြော ဘာတွေဘဲ ဘယ်လောက် ကောင်းအောင်လုပ်လုပ် ၀ိပသနာ အလုပ်အားမထုပ်သရွေ အကုသိုလ် အလုပ်ကြီးပဲလေ ဘုရားရှင်၏ဟောကြားချက်ပါ
ဟကောင်၇။ ဘု၇ားလက်ထက် ၀ိပသနာ အလုပ်လုပ်ကြတယ် မကြားဘူးပါဘူး
ဘု၇ားလည်း ၀ိပသနာအလုပ်အကြောင်း တခါမှမဟောပါဘူး
ဒါတွေက ဘု၇ားသာသနာ၂၅၀၀ ကျော်မှ အလိုလိုပေါ်လာတာ။
ဆရာတော်ကြီးတပါးကမိန့်တယ် ဒီခေတ်က သိကြားသာသနာမို့ သာသနာမပျက်ခင် ၀ိပသနာသာသနာပေါ်လာတာတဲ့
My senior burmese friend said the cannibalism case on U Larba isamake-up story. I don’t know he wasareal buddhist monk but was said to be an anti-government monk who tried to keep his place away from strangers and kids. I guess there might be some coincidences that some people went missing when this rumor came out. My friend, who wasaclose friend of police officer, went to see U Larba in custody and he was kind of broken into pieces and his face looked as small asaplum leaf because of brutal investigation. Police officer rejected the rumor and confirmed the political motives behind the case.
ဗန်းမော်ဆရာတော်ပြောတဲ့စကား မှန်လိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ တောင်နှစ်လုံးကြားနေတဲ့သူကို ပေါင်နှစ်လုံးကြားနေတဲ့သူက ဆရာမလုပ်ရဘူးတဲ့ ခင်ဗျားတို့ကော ဘယ်မှာနေမလဲ
ကျွန်တော်ကတော့ တောင်ကြားမှာပျင်းတယ် ….
လွန်လေပြီးသော ကျန်နေခဲ့ပြီးသော ပြန်ပြုပြင်လို့မရနိုင်သော
ပြောသမျှကို မှန်ကန်ပါတယ်လို့ရော မမှန်ပါဘူးလို့ရောသက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံစွာမပြနိုင်သော
အခုမှသိလို့လဲ ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ထွန်းနိုင်သော အကြောင်းတွေကို ပြန်ပြောပြီး
ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်လမ်းကို ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ကြမလဲလို့ စုပေါင်းစဉ်းစား
အဲဒီခေတ်တွေကိုတော့ မမှီလို့ မသိဘူး ကြားဘူးနားဝဘဲရှိတာ သေချာတာကတော့ မသိတာတွေ ထပ်သိရ တာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စာရေးသူရေ။
အဖွားက ညဖက်ဆိုရင် ပုံပြင်ပြောတိုင်း ဦးလာဘ အမြဲပါတတ်တာ
ဘာဆိုပါလိမ့် စဉ်းအိုးထဲမှ ချဉ်ရည် စိမ်ထားတယ်ဆိုလား မေ့တောင်နေပါပီ
အဲဒါကြီး ကို အဟုတ်ထင်နေတာ ။
ဦးလာဘအကြောင်းခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဦးလာဘအကြောင်းလားမှတ်တယ်။ စစ်အစိုးရ ကို မင်းတုန်းမင်းနဲ့ ယှဉ်ပြီး မကောင်းကြောင်းဖော်ပြချက်တွပါကလား။
kopauk mandalay ပြောသလိုပါဘဲ
စစ်အစိုးရ ကို မင်းတုန်းမင်း မှန်-မမှန်ဆိုတာတွေကို ဝေဖန် လေကန်နေတာထက်
မိမိ နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ကူညီနိုင်တဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ တတ်စွမ်းသမျှ အုတ်တချပ် သဲတစ်ပွင့် ပဲဖြစ်ဖြစ် တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီကြပါစို့ ။
အပြောမဟုတ် လက်တွေ့ဖြင့် ဒုက္ခရောက်နေသူ မြန်မာပြည်သူအများအကျိုး ကို ဆောင်ရွက်နေမှု
ဦးအောင်ခင်က ဘယ်ကဦးအောင်းခင်လဲ မြောက်ဥက္ကာ ကားပွဲစားတန်းကလား…..